Umdlalo weTrones Ascent ngoku uyi-iPhone kwaye isimahla | IPhone iindaba
Umdlalo weTrones Ascent ngoku uyi-iPhone kwaye isimahla
UCarmen rodriguez | | Iapps zokusebenza
Bambalwa kakhulu abangalwaziyo uthotho lwee Game of Thrones o Umdlalo weTrone, njengoko iguqulelwe kwiSpanish. Olu ngcelele ukophula iirekhodi zabaphulaphuli, kwaye ngaphezu kwayo yonke ubuqhetseba ukususela ngoku abalandeli abanakulinda ukuba ifike kumazwe abo ahambelanayo.
HBO, umtya ovelisa uthotho ubukele Utyalomali luvuzwa ngezabelo zabaphulaphuli, i kurhwebo ezijikeleza ilizwe liphela, amabhaso, kulo nyaka kuphela onawo Ukutyunjwa kwama-19 amabhaso emmy, kwaye ngoku midlalo yale saga yeencwadi.
Ekuqaleni ukhuphe lo mdlalo we-iPad ukuyenza ingqamana nokuqala kwexesha lesine, emva kuka-Matshi. Emva kwexesha wadibana kunye KongregateUkubonelela nge- uguqulelo lwewebhu kwaye ngoku uwuhlaziyile umdlalo kwi 2.0 version kwaye yongeza inkxaso yemveli ye-iPhone kunye ne-iPod.
Uhambo iqala iintsuku ngaphambi kokubhubha okungummangaliso kweSandla sikaKumkani. Ekuqaleni kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba ngaba uyi I-knight ejikelezayo okanye i-bastard, ukuba ulandela iindlela zakudala okanye ukuba uza kunqula isixhenxe, kufuneka uzenzele ubuwena.
Nje ukuba uchaze isimilo sakho kuya kufuneka funga ukuthembeka kwenye yezindlu; Stark, Lannister, Targaryen, Baratheon, Tyrell, okanye Greyjoy kwaye ungazihlikihla ngamagxa nabalinganiswa abaphambili boluhlu kwisidlo, kutyelelo lokujonga ukuthembeka kwakho, njl.
Ngoku ukuba uyazi ukuba ngubani omlwelayo, kuya kufuneka qesha umkhosi ukuze ukwazi ukubathumela kwiihambo kunye nokuphonononga iWesteros. Kuya kufuneka wakhe umfanekiso wakho wentlalontle, uqokelele ubutyebi kwaye uphucule amanani akho, ngale ndlela unako khuphisana nabanye abadlali kwaye ufumane izikhundla kuhlelo ngokubanzi.
Lo mdlalo usebenzisa iqonga IZiko leMidlalo lokunxibelelana nabahlobo bakhosy kulindeleke ukuba nayo Ukuhlaziywa rhoqo kunye nomxholo ohambelana neziqendu ezitsha eseleyo ezayo. Xa isiqendu esitsha siphuma, kuya kuvela izinto ezintsha kwaye ke unokujonga uthotho njengangaphambili.
Yenza ibali lakho kumaxesha amathathu okuqala kwaye ulungele, «Ubuska buyeza»
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » Umdlalo weTrones Ascent ngoku uyi-iPhone kwaye isimahla
Okanye kuye kwafuneka benze into enye eyenziwe yi-EU kwiApple (bayivuse) bethetha simahla xa kungenjalo, ethi ngu-Apple athi izakutshintsha igama. Kuba ngumdlalo onentengo ngaphakathi kwe-app kwaye hayi ngexabiso eliphantsi, ukuya kuthi ga kwi-89,99 ye- € inokushiyeka kumdlalo owonwabileyo.
Kuyinyani, ndilibele ukubeka ukuba ndinokuthengwa kwangaphakathi nohlelo, kodwa ukuthengwa kwenziwa ngesilivere kunye negolide, izixhobo onokuzifumana (ngokuthe ngcembe kunjalo) ngomdlalo ngokwawo kwaye ungatyali mali.
Enkosi ngengcaciso kuba bendifuna ukucacisa esi sihloko kwaye ekugqibeleni sandisinda.
Iwotshi yokuqala: iwotshi ihlala ikwi-screen esikhiweyo (Cydia)
Ungayilungisa njani into engekhoyo okanye ungavumelanisi abafowunelwa nge-iCloud kwi-iOS 7.1.2